Sei pasina 777 yeP3D V4?
1 gore 2 ago #894 by Josh13215
Kusvikira musi ndisingakwanisi kuwana kushanda kwe777 kuwedzera kweP3D V4. Zvichizove 'hapana chekutanga chiripo' kana kuti hachibatsiri P3D V4. Pane munhu ane chekushanda 777 kuwedzera kweV4?
1 gore 2 ago #896 by Gh0stRider203
Izvi zvakafukidzwa maitiro mashoma kare. AOT ye ndege haigoni kushanda naP3D V4 sezvavasina kugadzirirwa, zvakadaro. heino micheka miviri yandakawana ...
1 gore 2 ago #899 by Josh13215